I-WhatsApp ikhupha isifuba sabasebenzisi bayo bemihla ngemihla | IPhone iindaba
Sijongene ngenene nomfanekiso omangalisayo wesicelo esiqale njengenye indlela yokuba abambalwa bangahlawuli ngokuthumela imiyalezo kwaye kancinci kancinci sele ikhulile loo nto bayibonisayo namhlanje kwaye ibonakala ngathi inkulu kuthi, kwaye lonto Isigidi esinye sabasebenzisi bemihla ngemihla baninzi abasebenzisi.
Kuyinyani ngamanye amaxesha xa isicelo sichaphazeleka ngenxa yokusetyenziswa ngamandla kwabasebenzisi ngokwabo kwimihla echongiweyo njengokuphela konyaka okanye efanayo, kubonakala ngathi isicelo siza kuba nesiphelo esikufutshane, kodwa akukho nto ngaphezulu kwenyani kwaye amanani asemthethweni e-WhatsApp ayangqina.
Olunye uphawu oluphambili lokukhula kukuphuculwa okufakelweyo kwesi sicelo kule minyaka idlulileyo, kwimeko ye-iOS sisuka ekulindeni ixesha elide ukuba isicelo sihlaziywe emva kokuba iApple isungule i-iOS entsha, kude kube ngoku yenza isicelo silungile ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokumilisela uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza okanye kwangoko ngaphambili. Inkqubo ye- Isiteyitimenti esisemthethweni kuWhatsApp yile ilandelayo:
Kunyaka ophelileyo sabhengeza ukuba isigidi esinye sabantu kwihlabathi liphela sisebenzisa i-WhatsApp inyanga nenyanga. Namhlanje, sonwabile kwaye sinebhongo ukukwazisa oko yezigidigidi abantu kwihlabathi liphela basebenzisa iWhatsApp yonke imihla ukunxibelelana nosapho kunye nabahlobo bakho. Nokuba yabelana ngeefoto ezenzelwe wena kunye neevidiyo, ukunxibelelana ngeefowuni zevidiyo, okanye ukugcina nabahlobo ngeesitayile, ukunxibelelana ngeWhatsApp akuzange kube lula kwaye kube ngokwakho. Siyavuya kuba abantu abaninzi basebenzisa izinto ezintsha ukunxibelelana ngendlela ekhethekileyo.
Njengoko sibhiyozela le mpumelelo, sizinikele ngakumbi kunangaphambili ekuphuhliseni amanqaku aluncedo ukuze wonwabe, sigxile ekuthembekeni, kubulula, nakukhuseleko okulindele ku-WhatsApp. Enkosi ngenkxaso yakho.
Asithandabuzi ukuba kukho izicelo ezifanayo zokuthumela okanye zokufumana imiyalezo enezinto ezingcono kunye nezinto ezimbi ngakumbi, kodwa ubunzima kubasebenzisi banamhlanje buninzi kwaye uninzi lwabo bahlala bethembekile ekusetyenzisweni kwesicelo semiyalezo esiguqulwa ngalo lonke ixesha ye phucula kwaye ungeze imisebenzi enomdla kubasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » I-WhatsApp ikhupha isifuba sabasebenzisi bayo bemihla ngemihla
Ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes